PSJTV | कुलमानको तीन वर्ष पुरा
आइतबार, २९ भदौ २०७६ पिएसजे न्युज
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले स्मार्ट मिटर जडान गरेर टेलिफोनजस्तै स्वचालित विलिङ कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा गरेका छन् । तीन वर्षको अवधिमा आफूले गरेको काम र आगामी कार्ययोजनाबारे जानकारी दिँदै आइतबार पत्रकारहरुसँग उनले लोडसेडिङ अन्त्य गरेपछि प्राधिकरणको आन्तरिक सुधारमा लागेको बताए ।
घिसिङले चालु आर्थिक वर्षमा प्राधिकरणलाई डिजिटल बनाउने र इन्टरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिङ प्रणाली लागू गरिने जानकारी दिए । घिसिङले आगामी दिनमा वर्षायाममा उत्पादित विद्युतलाई खेर जान नदिई शतप्रतिशत आन्तरिक खपत वा निर्यात गराउन ध्यान केन्द्रित गरिने बताए । आफू प्राधिकरण आउनुअघि वर्षायाममा समेत ८ घण्टा लोडसेडिङ्ग व्यहोर्नुपरेको कहाली लाग्ने अध्यारो युगलाई उज्यालोमा परिणत गर्न सफल भएको उनको जिकीर थियो ।
तीन वर्षअघि प्रतिव्यक्ति वार्षिक उर्जा खपत करिब १ सय ५० यूनिट रहेकोमा अहिले २ सय ४५ यूनिट पुगेको पनि उनले जानकारी दिए । प्राधिकरण होल्डिङ्ग संस्थाको रुपमा रहने गरी हरेक प्रदेशमा स्वायत्त प्रदेश विद्युत वितरण संस्था खोलिने पनि घिसिङले बताए ।
साढे दुई वर्षमा सात हजार प्रहरीको राजिनामा, प्रहरीमा किन बढ्दै छ निराशा?
बलात्कारपछि १४ वर्षीया बालिका बेहोस
किन बिक्न छाड्यो जलविद्युतकाे सेयर?
डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठ बर्खास्त गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा, होला कारबाही?
३ मंसिर, काठमाडौं । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका कर्मचारीको चरम लापरबाहीका कारण लाखौं मूल्य बराबरको चामल गोदाममै कुहिएको छ। नागरिकलाई सुपथ मूल्यमा खाद्यान्न उपलब्ध गराउनुपर्ने लिमिटेडले समयमा नै चामल व्यवस्थापन ...
यूएईको आबुधाबीमा भएको बस दुर्घटनामा परी तीन नेपालीको मृत्यु भएको छ । यस्तै मृत्यु हुनेको संख्या ६ पुगेको छ । मृत्यु हुने नेपालीहरुमा झापाकी कृष्णकुमारी अधिकारी, प्युठानकी भावना कुँवर र ठेगाना ...